Fiatrehana ny krizy politika : Nampiseho fahendrena ny Filoham-pirenena -
AccueilRaharaham-pirenenaFiatrehana ny krizy politika : Nampiseho fahendrena ny Filoham-pirenena
02/06/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Raha tsy nentina tamim-pahendrena ny fiatrehana izao krizy politika misy izao, dia efa maro ny fahasimbana, ny fahapotehana, ny fifandonana, ny rà latsaka, ny fitondrana takaitra, toa izay nitranga nandritra ny krizy politika rehetra tany aloha, hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina, nandritry ny fanehoan-kevitra nataony tamin’ny fandaharana Fotoam-bita, nivoaka omaly hariva.
Toetra nampiavaka azy tokoa ny fahaizany mampiasa izany fahendrena nananany izany. Raha tamin’ny andron-dRavalomanana Marc tokoa no nisy mpanao fihetsiketsehana efa ho am-bolana toa ny zava-misy eo amin’ny 13 mey ankehitriny io angamba efa faty olona mirarakopana. Raha tamin’ny Tetezamita nentin-dRajoelina ihany koa no nisy mpanohitra mivorivory toy ny zava-misy ankehitriny io angamba efa feno ny fonjan’Antanimora. Tamin’ny fotoana nitondran’ireo filoha teo aloha ireo, dia tsy azo atao ny mivorivory, tsy azo atao ny manohitra eny an-dalambe. Ny amin’izao fotoana anefa, dia malalaka ny fanehoan-kevitra ka io mivily any amin’ny lalana tsy izy io.
Tsy midika akory izany fa rehefa malalaka amin’ny fanehoan-kevitra ny rehetra, dia afaka manongam-panjakana eny an-dalambe. Tsy afaka miverin-dalana hiaina anaty Tetezamita intsony ny Malagasy. Ny mpitondra ihany koa tsy hanaiky mora foana ny fihantsiana ataon’ny eny an-dalambe. Indrindra indrindra izy mpitondra lanim-bahoaka. Tsy azo atao sorona ny vahoaka. Tsy maintsy mijoro hatrany ny Filoha hitandro izany tombontsoam-bahoaka izany.
Niaraha-nahalala iny ny fanapahana navoakan’ny HCC, izay nametraka mazava fa manohy ny asany ny Filoha. Mitohy hatrany ny asa rehetra na misy aza ny disadisa politika. Mitohy koa ny fikaroham-bahaolana hataon’ny mpikatroka samihafa eto an-toerana na ny avy any ivelany. Miara-manaiky isika fa ampy hirosoana any amin’ny fanomanana fifidianana eken’ny rehetra ny ezaka rehetra hatao amin’izao sy ny efa vita. Ka aoka ny rehetra samy hitodika any amin’izay fanomanana ny fifidianana eken’ny rehetra izany. Aoka izay ny fandrombahana fahefana maimaimpoana eny an-dalambe, satria tsy tombontsoa ho an’ny firenena izany.
Raha fintinina izany, dia lesona goavana ho an’ireo zatra ny lalan-dririnina tsy mahalala afa-tsy fandrombaham-pahefana eny an-dalambe no nolazain’ny Filoham-pirenena tamin’ity Fotoam-bita ity. Nambarany tamin’izany ihany koa fa manohy ny asa rehetra nankinin’ny vahoaka taminy izy na eo aza ny disadisa politika.
Notanterahina omaly, tetsy amin’ny CCI Ivato, ny fanokafana sy fampahafantarana amin’ny fomba ôfisialy ny tetikasa fampivoarana ny sehatr’asam-panjakana (PAPSP) sy ny famatsiam-bola nasionaly ho amin’ny fitoviana. Ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no tonga nanotrona sy nanokatra ...Tohiny